Myanmar Gospel Song 2018 (ရိုးသားသူတစ်ဦး ဖြစ်ရန် ဤသို့ ဝမ်းမြောက်ခြင်း) A Cappella | အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်
ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းတွဲများ 6975
ရိုးသားသူတစ်ဦး ဖြစ်ရန် ဤသို့ ဝမ်းမြောက်ခြင်း
ကျွန်ုပ် တာဝန်ကို စိတ်နှလုံးရှိသမျှနှင့် ထိန်းသိမ်းနေ၊
ဖြစ်ရန် လုံးဝဆက်ကပ်ပါ၏။ (အား၊ မှန်၏!)
ကျွန်ုပ် ပွင့်လင်းဖြောင့်မှန်ကာ ကောက်ကျစ်မှုမရှိ၊ အလင်း၌ နေပါ၏။
ရိုးသားသူတွေ၊ အမြန်လာကြ၊ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ပြောကြစို့။
ရိုးသားသူတစ်ဦး ဖြစ် မှဤသို့ဝမ်းမြောက်ခြင်း!
ရိုးသားသူတစ်ဦး ဖြစ် မှ ဤသို့ဝမ်းမြောက်ခြင်း!
ကျွနု်ပ် တာဝန်ကို စိတ်နှလုံးရှိသမျှနှင့် ထိန်းသိမ်းနေ၊
ရိုးသားသူ ဖြစ်ရန် ကြိုးစားပါ၏။
(ဘုရားသ္ခင်က ကျွနု်ပ်တို့မှ များစွာမတောင်း)
သမ္မာတရား ကို ချစ်မြတ်နိုးသူအားလုံးဟာ